1°-Nanohy ny fampivondronana an’ireo ekipam-pirenena lahy sy vavy hiatrika ny lalaon’ny nosy 2019 nanomboka tamin’ny sabotsy 08 jona teo ka hotronin’ilay mpanazatra senegaley sady “docteur en psychologie du sport” mandritra ny 15 andro ny taranja basikety Malagasy ary hotohizana hatramin’ny farany miaraka amin’ny fampivondronana hotarihin’ny minisiteran’ny fanatanjahantena izany. Efa nivoaka ny lisitr’ireo mpilalao 15 lahy sy 15 vavy hifantenana ny 28 ho lisitra raikitra. 2 °-Tafita hiatrika ny lalao Afrikanina hotontosaina any Maroc ny 19-31 aogositra 2019 izao ny ekipa nasionaly Malagasy basket 3 x 3 lahy sy vavy. Miandry ny fanapahan-kevitry ny Malagasy hatramin’ny 30 jona izao farafahatarany ry zareo Marokanina. 3°-Haroso ny fanatanterahana ny dingana faha-2 amin’ny fiadiana ny ho tompondaka N1 A 2019 mba hahafahan’izay tompondaka hiatrika ny CCCOI dingana hahazoana mandray anjara amin’ny BAL “Basket-ball Africa” izay Afroleague vaovao hiarahana miasa amin’ny NBA. 4°-Vita Sonia ny hiarahana miasa amin’ny NBA mandritra ny 4 taona amin’ny hananganana ligy manahaka ny NBA eny anivon’ny sekoly 30 eto Tanà hahazoany manome fiofanana ny tanora sy manolotra fitaovana samihafa. 5°-Hanatrika Kongresin’ny FIBA Africa ny 22sy 23 jona any Mali ny basikety Malagasy sady hanana kandidà 2 hatolotra hofidiana ho “Conseils de developpement” sy ho mpikamban’ny birao foibe. 6°-Ny ekipan’ny Mb2All Malagasy tohanan’ny FMBB no handray eto Madagasikara ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika taranja basikety eo amin’ny ekipa tompondaka sokajy vehivavy hotontosaina amin’ny novambra na desambra 2019.